Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Xasuuqa Ogadenya (Ogaden Massacre Day) oo laga xusay dalka Jermalka
Maalinta Xasuuqa Ogadenya (Ogaden Massacre Day) oo laga xusay dalka Jermalka
Waxaa maanta oo ay taariikhriikhdu ahayd22/2/04 laga xusay magaalada Offenbach ee wadanka Jarmalka Malinti Xasuqa Ogadenia (Ogaden Massacre Day). Xuskan baroordiiqda ah ayaa waxa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaliyada iyo madax sare oo ka sacota JWXO.
Bishan oo ah bil kusuntan qalbiga shacabka wadanka Ogadenia ayaa sida caadada ahayd waxaa xuska lagu furay aayda quran kariimka iyo wacdi diini ah oo uu soo jediyay sheekh Axmed. Waxaa inta kadib cod bahiyaha lagu soo dhaweeyay gudomiyaha jaliyada halgame Axmed Farah. Gudomiyaha ayaa kahadlay sooyalka xasuuqa ka socda Ogadenia iyo dhibaatada lagu hayo shacabka birimagaydoda ah. Xubinka tirsan jaliyada S.Ogadenia ee Offenbach ayaa soo bandhigay muuqalo lagasoo duubay gudaha Ogadenia iyo xeryaha qaxootiga Ifo, Xagardheer iyo Dhagaxlay. Muqalada lagu soo bandhigay filimka ayay dadku ka dheehanayeen dhibatada lagu hayo shacabka ee kabaxsan bini adanimada iyo sida calamku isaga indha tirayo.
Waxaa kale oo codbahiya lagu soo dhaweeyay halgame ka tirsan ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya (OYSU) faraca Germany mdune Cabdirahman, kaasoo war bixin kooban siiyay dhalinyarada ugana waramay xaalada ururka dhalinyarada iyo halka uu hiigsanayo, waxa uuna ku booriyay inay yeeshaan midnimo, mintid iyo isku tashi, W-llaahu akbar.
Xuska aya ku soo dhamaday ballanqaad in la’isgarab taago shacabka dulman ee Ogadenya oo taageerada halganka lagaga xoreynayo gumaysiga lasii labanlaabo.